Salaad Roob Doon Ah Oo Maanta Laga Tukaday Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Salaad Roob Doon Ah Oo Maanta Laga Tukaday Muqdisho
Xuseen Axmed 14 November 2016 14 November 2016
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka Soomaaliya laga tukaday salaad roob doon ah oo boqolaal qof ay ku dukadeen Masaajidka Isbaheysiga.
Dukashada Salaada roob doonka ah ayaa waxaa ka qeyb galay qaar ka mid ah Culima’udiinka Soomaaliyeed, Masuuliyiin ka tirsan Wasaarada diinta iyo Awqaafta, Maamulka gobolka Banaadir Arday iyo Macalimiin ka socday dugsiyada Qur’aanka Kariimka ee Muqdisho.
Tukashada salaada roob doonka ah ka dib ayaa waxaa khudbado ka jeediyay mas’uuliyiintii ka qeyb gashay tukashada salaada ayagoo Alle ka baryay in shacabka ku nool Gobolada dalka uu ka dulqaado abaarta saameysay.
Sheekh Cali Maxamuud Cali Dheere oo ka mid ah Culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay faa’iidada ay leedahay Salaada roob doonka ah iyo waxa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed.
Weerar Maanta Lagu Qaaday Xarunta Doorashooyinka Galmudug